Izindaba - Ukuthengiswa kwezimoto eChina kukhanya njengamanye ama-reels womhlaba avela ku-virus
Ikhasimende likhuluma nomthengisi ezitolo zakwaFord eShanghai ngoJulayi 19, 2018. Imakethe yezimoto emnothweni omkhulu wase-Asia iyindawo eyodwa ekhanyayo njengoba ubhadane ludambisa ukuthengisa eYurophu nase-US Qilai Shen / Bloomberg
Isidingo sezimoto eChina siya ngamandla, okwenza imakethe yezimoto emnothweni omkhulu wase-Asia ibe yindawo eyodwa ekhanyayo njengoba ubhadane lwe-coronavirus ludambisa ukuthengisa eYurophu nase-US.
Ukuthengiswa kwama-sedan, ama-SUV, ama-mini kanye nezimoto eziningi kukhuphuke ngo-7.4% ngoSepthemba kusukela onyakeni owedlule kuya ezigidini ezingu-1.94, kusho iChina Passenger Car Association ngoLwesibili. Lokho ukukhuphuka kwesithathu okuqondile nyangazonke, futhi bekuqhutshwa ikakhulu ukufunwa kwamaSUV.
Ukulethwa kwezimoto kubathengisi kukhuphuke ngamaphesenti ayisishiyagalombili kuya kumayunithi ayisigidi esingu-2.1, kanti ukuthengiswa kwezimoto okuphelele, kufaka phakathi amaloli namabhasi, kwandise amaphesenti ayi-13 kuya ezigidini ezingama-2.57, imininingwane ekhishwe kamuva yiChina Association of Automobile Manufacturers ikhombisile.
Ngokuthengiswa kwezimoto e-US naseYurophu kusathinteka yi-COVID-19, ukuvuselela isidingo eChina kuyisibusiso kubakhiqizi bamazwe nabasekhaya. Kubhekwe ukuthi kube yizwe lokuqala emhlabeni wonke ukubuyela emuva kumazinga evolumu ka-2019, noma ngabe yi-2022 kuphela, ngokusho kwabaphenyi kubandakanya iS & P Global Ratings.
Abakhiqizi bezimoto emhlabeni jikelele batshale izigidigidi zamaRandi eChina, okuyimakethe yezimoto ehamba phambili emhlabeni kusukela ngo-2009, lapho isigaba esiphakathi sanda kepha ukungena kusesezingeni eliphansi. Amabhizinisi avela emazweni anjengeJalimane neJapane abhekane nalolu bhubhane kangcono kunezimbangi zabo zasendaweni - isabelo semakethe esihlanganisiwe semikhiqizo yamaShayina sehle saba ngamaphesenti angama-36.2 ezinyangeni eziyisishiyagalombili zokuqala sisuka kumaphesenti angama-43.9 ngo-2017.
Noma imakethe yezimoto yaseChina ilulama, isengaqopha ukwehla kwayo kokuthengisa ngonyaka okuthathu, uXin Guobin, oyiPhini likaNgqongqoshe eMnyangweni Wezezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi, kusho inyanga edlule. Lokho kungenxa yokwehla okunzima okutholakale ekuqaleni konyaka, ngesikhathi ukuphakama kokuqubuka.
Akunandaba, ukubaluleka kweChina kukhuliswa ukugxila kwayo ekunakekeleni uhlelo lwezemoto ezisebenza ngogesi, ushintsho lobuchwepheshe lapho abenzi bezimoto batshale khona isikhathi nemali enkulu. IBeijing ifuna izimoto zamandla amasha zibhekele amaphesenti ayi-15 noma ngaphezulu emakethe ngo-2025, futhi okungenani isigamu sakho konke ukuthengisa eminyakeni eyishumi kamuva.
Ama-Wholesales ama-NEV, aqukethe izimoto ezisebenza ngogesi ezimsulwa, ama-plug-in ama-plug-in nama-fuel-cell autos, akhuphuke ngamaphesenti angama-68 aya kumayunithi ayi-138,000, okuyirekhodi lenyanga kaSepthemba, ngokusho kweCAAM.
AbakwaTesla Inc., abaqale ukulethwa kusuka egigafactory yayo yaseShanghai ekuqaleni konyaka, bathengise izimoto eziyi-11 329, kwehle zisuka ku-11 800 ngo-Agasti, kusho iPCA. Lo mphathi wezimoto waseMelika ukleliswe endaweni yesithathu kuma-wholesales e-NEV ngenyanga edlule, ngemuva kwe-SAIC-GM Wuling Automobile Co ne-BYD Co., kwengeza i-PCA.
I-PCA ithe ilindele ukuthi ama-NEV asize ekuqhubekiseni ukukhula kokuthengiswa kwezimoto jikelele kwikota yesine ngokwethulwa kwamamodeli amasha, ancintisanayo, kanti amandla ase-yuan azosiza ukwehlisa izindleko endaweni.
Ukuthengiswa kwezimoto sekukonke ngonyaka ophelele kufanele kube ngcono kunesibikezelo sangaphambilini sokwehla kwephesenti ngo-10 ngenxa yokutholakala kwesidingo, kusho uXu Haidong, oyiphini likanjiniyela omkhulu weCAAM, ngaphandle kokuchaza.
I-Bolt Shock Absorber, Ihabhu Lesondo, ITire Ball Joint, I-Rubber ye-Shock Absorber, Isifaki seHood Shock, Iqhubu langaphambili Lokuqondisa,